HDPE ပိုက်ကိုတူးဖော်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ပိုက်များနှင့်အတူ HDPE ပိုက် - စက်ရုံစျေးနှုန်း - နေပူပူ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > HDPE ပိုက် > HDPE တူးပိုက် > HDPE ပိုက်နှင့်သောင်တူးရန်အတွက်အနားကွပ်နှင့်အတူပိုက်
သောင်တူးခြင်းလုပ်ငန်းသည်ယနေ့ ပို၍ ပို၍ လူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှ HDPE ပိုက်သည်အရည်၏ဖိအားအောက်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ရောစပ်ခြင်းကဲ့သို့သောရွှံ့စေး၊ နုန်း၊ သဲ၊ ကျောက်စရစ်များနှင့်ကြီးမားသောအရွယ်အစားများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ HDPE Dredge ပိုက်များကို High Density Polyethylene ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်များမှထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ရေငုပ်ပိုက်များကို HDPE flange adapter နှစ်ခုနှင့် 'HDPE flanged pipe' ဟုလည်းခေါ်သည့်သံမဏိပြားနှစ်ခုဖြင့် ပြုလုပ်၍ ဂဟေဆော်ထားသည်။ ၎င်းမှပိုက်နှစ်ခုကိုအနားကွပ်များဖြင့်အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးပင်လယ်အထက်တွင်ရေပေါ်ဆက်ရှိနေရန်ရေပေါ်မျောပါလျက်ရှိသည်။ သဘာ ၀ ဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အသုံးပြုရန်၊ Dredge HDPE ပိုက်များကို Polyurethane (foam) ပစ္စည်းများဖြင့်ပြည့်သော floaters များနှင့်အတူတကွအသုံးပြုသည်။ အချို့သောစီမံကိန်းများသည်မြစ်သို့မဟုတ်သမုဒ္ဒရာတွင်းတူးရန်အတွက်ရာဘာပိုက်များဖြင့်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
တူးဖော်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုအနေနှင့် HDPE သောင်ပိုက်သည်အောက်ပါအတိုင်းအားသာချက်များစွာရှိသည် -
â€»ချေးမှုခံနိုင်ရည်: ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးမှပူးတွဲပါရန်မြင့်မားသောခုခံမှု, လြှပျစစျချေးမရှိ။
â€»မြင့်မားသောခိုင်မာမှု: HDPE ပိုက်၏ကျိုးတိုးချဲ့မှုနှုန်း, များသောအားဖြင့် 500% ကျော်။ အခြေစိုက်စခန်း၏မညီမညာဖြစ်နေသောအခြေအနေနှင့်၎င်း၏လိုက်လျောညီထွေရှိမှုစွမ်းရည်သည်အလွန်အားကောင်းပြီး၊
- ပေါ့ပါးခြင်း - သံမဏိပိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့် HDPE ပိုက်သည်အလေးချိန်ရှိသံမဏိပိုက်၏ ၁/၅ သာဖြစ်သည်။
- တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူခြင်းသို့မဟုတ်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ အနားကွပ်များပါသော HDPE သောင်ပိုက်ကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖြုတ်နိုင်သည်။
ကောင်းမွန်သော ၀ တ်စားဆင်ယင်မှု၊ အနိမ့်နံရံပွတ်တိုက်နိုင်မှုကိန်း၊ စီးဆင်းမှုသေးငယ်မှု၊
- ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင် - HDPE ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်နယ်မှထောက်ခံအားပေးသည့်ထိရောက်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုသဘောတရားနှင့်အတူ
အပျိုစင် PE100 ကုန်ကြမ်း
အနက်ရောင်အရောင် (သို့) တောင်းဆိုချက်အရ
နှစ်ဖက်စလုံးမှသံမဏိအနားများ (အတိုင်းအတာ) သံမဏိအနားကွပ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည် - တောင်းဆိုမှုအတိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
အနားကွပ် သံမဏိသို့မဟုတ်ကာဗွန်သံမဏိ (PP ဖြင့်သွပ်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ် coated)
အရှည် ၅.၈ မီတာနှင့် ၁၁.၈ မီတာရှိသောအရက်ဆိုင်များတွင်ပြုလုပ်ရန်
ပုံမှန်အသုံးပြုရန် 1 နှစ်
SUNPLAST can provide HDPE သောင်ပိုက် from dn110mm to dn1200mm, with specifications as below:
မှတ်ချက် - အဆုံးသတ်နှစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့သံမဏိအနားတွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ် - တောင်းဆိုမှုအတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
SUNPLAST HDPE သောင်ပိုက်s have been exporting to more than 10 countries, such as Bangladesh, India, Singapore, South Africa, Zambia, Netherlands, Denmark, Paraguay.,etc. Thanks to the superior quality, all customers are satisfied about us. SUNPLAST dredge HDPE pipe has been the first choice for our customers.
hot Tags:: HDPE ပိုက်နှင့်တူးဖော်ခြင်းနှင့်အတူပိုက်လိုင်းများ၊ တရုတ်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ စက်ရုံများ၊ စက်ရုံများ၊ စျေးနှုန်း၊ ၀ ယ်ခြင်းများ
HDPE သောင်ပိုက်HDPE တူးပိုက်သောင်ပိုက်သောင်များအတွက် HDPE ပိုက်HDPE သတ္တုတွင်းပိုက်တူးပိုက်ပိုက် Dredge8 လက်မ Dredge ပိုက်10 လက်မ Dredge ပိုက်Poly သောင်ပိုက်